Arsenal oo ku ciyaareysa Uganda,goorma?
Sunday, March 24th, 2019 - 10:30:18
Saturday February 17, 2018 - 11:00:58 in Wararka by kubadbile news
Kooxda Kubadda Cagta Arsenal ayaa la xaqiijiyay in xagaaga soo socda ay ku ciyaareyso Dalka Uganda ee qaaraddan Afrika.
Bosco Onyik; oo ka mid ah guddiga Ciyaaraha ee wasaaradda dhaliinyarada iyo Ciyaaraha Uganda ayaa xaqiijiyay in ay heshiis la gaareen Kooxda Arsena,kaas oo xagaaga soo socda ay ku tageyso Dalka Uganda kuna ciyaareyso.
Bosco Onyik,waxaa uu sheegay in ay Magaalada London kula kulmeen madaxda Arsenal iskuna raaceen in ay tababaraan Garsoorayaasha iyo tababarayaasha Uganda,sidoo kale Dugsi ciyaaraha lagu barto ka furan Dalka Uganda iyaga oo Bisha June ee Sanadka dambena tagaya Uganda si ay ula ciyaaraan kooxaha dalkaas kuwo ka mid ah.
Waxaa uu sheegay in arrintan looga golleeyahay kordhinta mashruuca ciyaaraha Dalka Uganda oo ay dowladda halkaas dakhli ka raadineyso.
Charles Bakkabulindi, oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda Ciyaaraha Uganda ayaa sheegay in is faham labada dhinac dhexmaray uu sheegayo in la dhameystirayo.
Bisha March ee soo socota ayuu sheegay in madax ka socota Kooxda Arsenal ay tagi doonaan Dalka Uganda islamarkaana ay kala saxiixan doonaan heshiis is faham ah halkaasna lagu faah faahinayo heshiisyada ay galeen labada dhinac.